Ukungezwani komzimba nobuthi bezinambuzane - i-GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Ukungezwani komzimba nobuthi bezinambuzane
Ukungezwani komzimba nobuthi bezinambuzaneIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-27T10:53:32+02:00
Kunezinhlobo eziningi zezinambuzane ezingadala ukusabela kokungezwani komzimba nenambuzane:
njengezinyosi, iminyovu, uphondo, amajakhethi aphuzi nezintuthwane zomlilo yizo eziningi kakhulu. Lezi zinambuzane, zijova into enobuthi ebizwa ngokuthi i-venom. Iningi labantu eligwazwe yilezi zinambuzane liyalulama kungakapheli amahora noma izinsuku. Kwabanye, lesi sihlungu singadala ukusabela okweqile okusongela impilo (Anaphylaxis).
Izintuthwane zomlilo ziyizinambuzane ezihlabayo ngokuvamile ezitholakala ezindaweni eziseNingizimu / eningizimu-mpumalanga ye-United States. Kubantu abanokungezwani komzimba nomlilo, izitinyela zingadala ukusabela okusongela impilo kwe-anaphylactic. Ngenxa yamandla okuphendula okunzima, ukuxilongwa okufanelekile kokungezwani komzimba nomlilo kubalulekile ekulungiseleleni isimo esiphuthumayo.
Izintuthwane zomlilo zakha izidleke zenhlabathi emhlabathini, imvamisa emaphethelweni ezindlela zomgwaqo noma emigwaqweni. Izintuthwane zomlilo ziluma ngemihlathi yazo ngenkathi ziluma. Lokhu kubenza bakwazi ukukhipha isitini, baphendukise futhi balume futhi. Idlozi elilodwa lingahlaba izitimbili ngezikhathi ezithile. Ubuthi obutholakala entuthwaneni yomlilo buzoholela eshashalazini eligcwalisa impahla emhlophe cishe emahoreni angama-24. Yize lokhu kubukeka njengesilonda esigcwele ubomvu okufanele sikhishwe, siyinyumba ngempela, futhi sizolapha ngokushesha okukhulu uma sishiywa sodwa.
njengemiyane, izimbungulu eziqabulayo, izimbungulu, amazeze nabanye. Iningi labantu elilunywe yizinambuzane lizwa ubuhlungu, ukubomvu, ukulunywa, ukuntinyelwa nokuvuvukala okuncane endaweni ezungeze ukulunywa.
Ngokuthakazelisayo uhlobo olulodwa lwemikhaza, umkhaza we-Lone Star ungadala ukuthi abantu bahlakulele ukungezwani nenyama. Uma unezimpawu zokungezwani komzimba ngemuva kokudla inyama, bona i-allergist.
Izibungu zasendlini futhi amaphela nawo angadala ukungezwani komzimba. Lezi ezimbili zingaba imbangela ejwayelekile kakhulu yokungezwani komzimba nesifo somoya. Imfucumfucu yomzimba wamaphela kanye nothuli kubangela ukungezwani nezinto ezithile, ngokungafani nephela, i-dust mite incane kakhulu ukubona ngeso lenyama.
Izimpawu Zesifo Sokungezwani Komzimba Nezinambuzane
Iningi labantu litinyiwe noma lilunywe yizinambuzane lizwa ubuhlungu, ukubomvu, ukulunywa nokuvuvukala okuncane endaweni ezungeze ukulunywa noma ukutinyelwa. Lokhu ukusabela okujwayelekile. Iningi labantu liba ngcono kungakapheli amahora noma izinsuku. Eminye empeleni iguliswa yizinhlungu zezinambuzane futhi amasosha omzimba asabela ngokweqile kubuthi. Uma ungenwe yisinambuzane, ngemuva kobuhlungu bokuqala, umzimba wakho ukhiqiza amasosha omzimba abizwa nge-Immunoglobulin E (IgE). Uma iphinyiwe futhi ngohlobo olufanayo lwesinambuzane, ubuthi buhlangana naleli gciwane elithize le-IgE futhi budale ukusabela okweqile. Abantu bangaba nempendulo ebabazekayo yokuguliswa yizinambuzane ezihlabayo noma ezilumayo. Ezinye izimpawu zifaka:
Ukuqhuma kwesikhumba, ukulunywa noma isifuba
Ukuphefumula okuncane, inkinga yokuphefumula noma ukuphefumula
Isiyezi kanye / noma ukuquleka
Ubuhlungu besisu, ukuhlanza, isifo sohudo
Ukuvuvukala kwezindebe, ulimi noma umphimbo
Ukwelashwa Kwezilwelwe Zesihlungu Sezinambuzane
Uma lesi sinambuzane sishiya uluthi lwaso esikhumbeni,
susa isilingo ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngoba kuthatha imizuzwana nje ukuthi ubuthi bangene emzimbeni wakho. Khipha i-stinger nganoma iyiphi indlela ongayenza ngayo, njengezinzipho zakho noma i-tweezer.
sebenzisa ukucindezela okubandayo noma iqhwa ukudambisa izinhlungu nokunciphisa ukuvuvukala.
Uma ukuvuvukala nokulunywa kuhlotshaniswa nokusabela okukhulu kwendawo ungangeza
ukhilimu we-hydrocortisone ukunciphisa ububomvu, ukulunywa noma ukuvuvukala.
thatha umlomo i-antihistamine
gwema ukunwaya indawo enameva. Lokhu kuzokwenza ukuluma nokuvuvukala kube kubi futhi kwandise ubungozi bokutheleleka.
Uma unezinambuzane ezingezwani neze negciwane, phatha i-adrenaline / epinephrine ejova ngomjovo. Kungumuthi wokutakula kuphela, futhi kusamele ube nomuntu okuyisa egumbini labezimo eziphuthumayo ngokushesha uma ulunywa.
Izinyosi nezinye izitinyela zezinambuzane kuyimbangela evamile ye-anaphylaxis. Uma ngabe usabele ngokungathi sína ekuthweni yizinambuzane, i-venom yokungezwani komzimba ne-immunotherapy iyasebenza kakhulu. Lezi zibhamu zokungezwani komzimba, ngokuvamile ezinikezwa njalo iminyaka embalwa, zinganciphisa noma zisuse impendulo yakho yokungezwani komzimba nobuthi bezinyosi.
Ukuvimbela ukungezwani komzimba ne-Insect Venom
Lezi zinambuzane kungenzeka zilume uma amakhaya azo ephazamiseka, ngakho-ke kubalulekile ukuhlala kude.
Qaphela ngaphandle lapho upheka, udla noma uphuza iziphuzo ezinoshukela njenge-soda noma ijusi.
Qaphela izinambuzane ngaphakathi kwezitroyi noma iziphuzo ezisemathinini.
Iphunga lokudla liheha izinambuzane, gcina ukudla kuvaliwe kuze kudliwe.
Sula udoti, izithelo eziwile.
Vala iziqukathi zokudla namathini kadoti.
Gwema ukuhamba ungafake zicathulo.
Gqoka izicathulo ezisondelene lapho uhamba ngaphandle.
Ungafaki imibala egqamile noma imibhalo yezimbali, engaheha izinyosi.
Uma izinambuzane ezindizayo ezilumayo ziseduze, ungalwi ngezandla zakho, (ukuswayinisa isinambuzane kungadala ukuthi ikulume) hlala uzolile uhambe.